एनसेलले डेटा विनै नेट चलाउनेहरुको लागि ल्यायो फाइदै फाइदाको योजना - सिम्रिक खबर
अफगानिस्तानमा भिसाका लागि आवेदन दिन भागदौड मच्चिँदा कम्तीमा १५ जनाको ज्यान गयो बजाज डोमिनार २५० को तिहारपछि मात्र बिक्री सुरु हुने स्कल इन्टरनेशनलले नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सन् २०२० को प्रेसिडेन्ट अवार्ड प्रदान गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गर्यो कक्षा १२ को परीक्षा तालिका डिपफेक प्रविधिको प्रयोग गरी एक लाखभन्दा बढी महिलाको तस्वीर नग्न रुपमा सार्वजनिक पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५ हजार ७४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
एनसेलले डेटा विनै नेट चलाउनेहरुको लागि ल्यायो फाइदै फाइदाको योजना
काठमाडौँ । नीजि फोन सेवा प्रदायक एनसेलका ग्राहकले मेन ब्यालेन्सबाटै सुलभ दरमा डेटा सेवाको फाइदा लिन सक्ने अफर ल्याएको छ । विशेष गरी एमबी नलिई नेट चलाउन खोज्नेहरुको लागि बढी शुल्क लाग्ने कुनै डर बिना ढुक्कसँग नेट चलाउन भन्दै एनसेलले आफ्ना ग्राहकका लागि आकर्षक साप्ताहिक ‘पे एज यू गो’ योजना ल्याएको हो। जसअन्तर्गत ग्राहकले करबाहेक ४० पैसा प्रतिएमबीसम्ममा डेटा सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। बुधबारदेखि लागू हुने गरी ल्याइएको ‘पे एज यू गो’ अर्थात मेन ब्यालेन्सबाटै विद्यमान प्रतिएमबी करबाहेक रु. २ मा डेटा सेवा प्रयोग गर्ने र सुलभ दरमा डेटा सेवा प्रयोग गर्नका लागि प्याक सुविधा नलिने ग्राहकलाई ध्यानमा राखी सुलभ दरमा सेवा प्रदान गर्न यो योजाना ल्याइएको एनसेलले जनाएको छ।
यस योजनामा ग्राहकले आफ्नो मेन ब्यालेन्सबाट जति धेरै खर्च गर्दछन्, त्यसैअनुरुप डेटाको शुल्क अझ सुलभ हुँदै जान्छ। यदि ग्राहकले ‘पे एज यू गो’ अन्तर्गत एक हप्तामा डेटाका लागि रु. २० सम्म खर्च गरेमा विद्यमान ‘पे एज यू गो’ शुल्क रु. २ प्रतिएमबी पर्दछ। एक हप्तामा ग्राहकले रु. २० देखि रु. ५० सम्म डेटा सेवामा खर्च गर्नेबित्तिकै सेवा प्रयोगका लागि प्रतिएमबी शुल्क रु. १ मा झर्दछ। त्यसैगरी यदि ग्राहकले एक हप्तामा रु. ५० भन्दा बढी खर्च गर्नेबित्तिकै प्रतिएमबीमात्र रु. ४० पैसामा मेन ब्यालेन्बाटै डेटा सेवाको फाइदा लिन सक्छन्।
साप्ताहिक चक्रमा हरेका हप्ता आइतबारदेखि शनिबार सम्ममा ग्राहकले ‘पे एज यू गो’ डेटाअन्तर्गत गरेको खर्चका आधारमा यो योजना सञ्चालन हुन्छ। जस्तै– कुनै ग्राहकले आइतबारदेखि बुधबारसम्ममा ‘पे एज यू गो’ डेटा सेवामा रु. २३ खर्च गरेमा ग्राहकको मेन ब्यालेन्सबाट रु. २० भन्दा बढी खर्च हुनेबित्तिकै ‘पे एज यू गो’ शुल्क त्यही हप्ताको शनिबार मध्यरातसम्मका लागि रु. १ प्रतिएमबीमा झर्नेछ। त्यस्तै सोही ग्राहकको खर्च उक्त हप्ता रु. ५० भन्दा बढी हुनेबित्तिकै ग्राहकले त्यस हप्ताको शनिबार मध्यरातसम्मका लागिमात्र ४० पैसा प्रतिएमबीमा डेटा सेवाको फाइदा लिन सक्दछ। आफ्ना ग्राहकका लागि मेन ब्यालेन्सबाटै सुलभ दरमा डेटा सेवा सुनिश्चित गर्ने यो आकर्षक सेवा ल्याउन पाएकोमा एनसेल निकै हर्षित रहेकोे कम्पनीले जनाएको छ। सुलभ दरमा डेटा प्रयोग गर्न डेटा प्याकहरु सबैभन्दा राम्रो विकल्प भए पनि यस योजनाले कुनै डेटा प्याक सुचारु नगरी ‘पे एज यू गो’ मा डेटा चलाउने ग्राहकलाई ठूलो फाइदा पुर्याउने विश्वास एनसेलले लिएको छ।